Shandong honglu enzima kushishino co., LTD., Lwembali Shandong tang kwiqela, iqela co., LTD., Owasekwa ngo-1956, abasebenzi inkampani abantu amawaka amathathu, zobugcisa uphando kunye nophuhliso iqela labantu abangaphezu kwamakhulu amathathu, iye phambili imigca yemveliso , enamathela workshop, workshop welding, workshop bexhentsa, inamava esisityebi imveliso, uphando kunye nophuhliso.
uphando yenkampani yethu kunye nophuhliso loshishino imbi ukwenziwa yokuqala domestic kwinkampani oomatshini lobunjineli imigodi dubulo-ubungqina, zonke nkampani kunye nobuchwepheshe uphando oluzimeleyo kunye nophuhliso, kunye amalungelo empahla ozimeleyo yengqondo, yeyona lwemigodi engundoqo rubber_tyred izithuthi ilungu lombutho, kuba ezamkelwa ngumbutho kwamashishini ukubeka shishino.
Yasekwa ngonyaka ka ekuqaleni i AnBiao abandakanyeke kwezatifiketi imveliso, iziqinisekiso zemfundo, zonke iimveliso baye iziko ukhuseleko lwesizwe esimbaxa yophicotho zobugcisa, nguye amashishini yokuqala lwasekhaya ukufumana isatifikethi sam dubulo-proof. Esebenzisa iziko lokuhlola ukhuseleko lwesizwe kunye kweliso nokhuseleko ngokutsha bureau ngokudibeneyo site, ngokusebenzisa inkampani iseti epheleleyo data zobugcisa, izixhobo ezahlukeneyo, amandla emveliso, kwaye ngaphezu kwama-100 software kunye neemveliso yenkampani hardware.The kaThixo ezisetyenziswa kakhulu yamalahle, ore phosphate , intsimbi kunye yegolide. Isithuthi nezibilini zayo, iinkqubo kunye nezinye iiprojekthi ziye zanikwa isiqinisekiso patent yesizwe.
Njengokuba iimfuno zokhuseleko yesizwe yamalahle kunye yam, lam liya lisiba ngakumbi phezulu semfuno izixhobo zokuthutha, imveliso yethu yenkampani ye dubulo-ubungqina kunye nezixhobo elekhtrons zokuhamba emanzi zingqinelane neemfuno ukhuseleko yam yesizwe, i imveliso yokuzikhethela kwiqela ezininzi elikhulu. Le nkampani isekelwe ekhaya kwaye uya ehlabathini. Emva qhinga sophuhliso loqoqosho kweli lizwe, kwicala lobonelelo ngokutsha ngokuthe ngcembe olunzulu kunye noshishino omtsha amandla, oluzinzileyo market kwemigodi zasekhaya, qhubeka ukuba ziphuhlise imveliso entsha amandla ukuphucula ulwazi imveliso kunye neentengiso. Layout ngenkuthalo kumbindi Asia, market mpuma Asia amazwe. Kwaye eRashiya, eMyanmar, Philippines kunye namanye amazwe ziseke ubudlelwane zoshishino.
Shandong honglu nzima kushishino co., LTD.Located e r lobunjineli lezemigodi & d kunye nokuveliswa oomatshini kunye izahlulo, ukuba ndingahlangani "uxanduva, ezintsha, oluthembekileyo" ingqiqo yophuhliso, ukubambelela i "ukwenza entle kunye namandla, wenze elide" uphuhliso yomgaqo-nkqubo, lizinikele ukuba babe yasekhaya lokuqala-class, ngamazwe amashishini oomatshini zobunjineli owaziwayo.
Idilesi: akukho . 1 indlela meishan, ummandla uphuhliso loqoqosho Zibo, isixeko Zibo, Shandong kwiphondo.